मस्तिष्कको स्मरणशक्ति बढाउनको लागि खानैपर्ने ८ खाना !! | सुदुरपश्चिम खबर
मस्तिष्कको स्मरणशक्ति बढाउनको लागि खानैपर्ने ८ खाना !!
फर्सीको बियाँ : फर्सीको बियाँको प्रयोग चकलेटमा पनि गर्न सकिन्छ । तर, यसको बियाँ निकै फाइदाजनक हुन्छ । मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउन यसको बियाँ खाने गर्नुपर्छ । यसको बियाँमा जिंकले स्मरण शक्ति बढाउँछ । साथै, सोच्ने शक्तिको पनि बिकास गर्न सघाउँछ ।
डार्क चकलेटः डार्क चकलेट सर्वश्रेष्ठ खानेकुरामा पर्छ । विशेषज्ञका अनुसार यसको सेवनले मस्तिष्कको क्षमतामा वृद्धि विकास गर्छ । यसमा फाइबर, मिनरल्स, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड जस्ता कार्बनिक यौगित पाइन्छ । यसले उच्च रक्तचापको पनि नियन्त्रित गर्छ । यसले रक्तसञ्चार पनि तन्दुरुस्त बनाउँछ । यसले मस्तिष्कसम्म पुग्ने रगतलाई पनि सफा बनाउँछ ।
ब्रोकाउलीः ब्रोकाउलीमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड, फ्लेवोनोइड, भिटामिन ई, आइरन र कपर जस्ता पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यसले दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ । मस्तिष्को कार्यक्षमता पनि यसले बढाउँछ ।
बदामः स्मरणशक्ति बढाउन बदाम खाने गर्नुपर्छ । हरेक दिन ११ देखि १२ वटा बदाम खाने गर्नुपर्छ । यसलाई दूधमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ ।
ओखरः ओखरले दिमागलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । यसमा पाइने थुप्रै पोषक तत्वले मस्तिष्कलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ । यसले मस्तिष्कलाई सक्रिय पनि बनाउँछ । ओखरमा भिटामिन ई, कपर, म्यागाजिन जस्ता तत्व हुन्छ जसले मस्ष्तिकलाई शक्ति दिन्छ ।
ग्रीन टीः ग्रीन टीमा दिमागको कार्यक्षमता बढाउने तत्व पाइन्छ । यसमा पाइने क्याफिनले दिमागलाई सतर्क बनाउने, स्मृति बढाउने काम गर्छ । ग्रीन टीमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । दिनमा २ देखि ३ कप ग्रीन टी पिउने गर्नुपर्छ ।
अनार : स्मरणशक्ति बढाउन अनार निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसले सेवनले यसमा हुने पोलिफेनल्स नामक मोलिक्युल क्बल ब्रेन ब्यारियरलाई हटाएर न्यूरोडिजेनरेटिभ नाम बिरामीबाट सुरक्षा दिन्छ ।
बेरीः जामुन, स्ट्रबेरी, अंगुर जस्ता फलहरुमा म्याग्निज, भिटामिन सी, भिटामिन के र फाइबर जस्ता पोषक तत्वहरुले भरिएको हुन्छ । यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट फ्लेवोनाइड्स जस्ता तत्वहरुले मस्तिष्कको तन्तुहरुलाई मजबुत बनाउँछ । (gnewsnepal बाट सभार)